Emerald Dhismaha Fardaha - Joornaalka Naqshadeynta
Dhismaha Fardaha Mashruuc dhismeedka iyo mashaariicda dhismaha oo dhammaystiran ayaa mideeya dhammaan lixda dhisme waxay muujinayaan aqoonsi shaqeynaya mid kasta. Faahfaahin dheeri ah oo ka mid ah fagaarayaasha iyo xeryaha lagu jiheeyo xudunta isku dhafan ee maamulka. Dhismaha lixda dhinac ah sida shabakadda loo yaqaan 'crystal grid' waxay ku tiirsan tahay qaab alwaax ah sida silsiladda. Xagalka saddexagalka oo lagu qurxiyay ku kala firidhsan muraayad sida faahfaahinta sumurudka. Dhismaha qalooca ee qalooca wuxuu iftiiminayaa albaabka weyn ee laga soo galo. Shabakadaha 'Facades grid' sidoo kale waa qayb ka mid ah meelaha bannaan, halkaas oo jawiga laga arko shabakad hufan. Gudaha ayaa sii wadaya mawduuca qaabdhismeedka alwaaxda, iyadoo la adeegsanayo cabbirka canaasiirta si loo qiyaaso miisaanka aadanaha.
Magaca mashruuca : Emerald , Magaca naqshadeeyayaasha : Polina Nozdracheva, Magaca macmiilka : ALPN Ltd./Architectural laboratory of Polina Nozdracheva Ltd..
Dhismaha Fardaha Polina Nozdracheva Emerald